प्रिय कवि ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ पुष १२, शनिबार ०१:५५ गते
म्यासेजको रिप्लाइ गर्नुभएछ, खुसी छु, निकै खुशी । विश्वास थिएन आउला भन्ने, ठूलो खेद थियो हराउनुभएकोमा । एउटै प्रश्न घुमिरहन्थ्यो मस्तिष्कमा– हजुर कहाँ हराउनुभयो, किन हराउनुभयो ?
मलाई अझै याद छ त्यो कार्यक्रम । हजुर स्टेजमा उक्लिनासाथ तालीका फोहोरा छुटेका थिए, ठूलो मासभित्रबाट । अग्लो कद, लामो कर्ली केश, अग्लै निधार, कालो वर्ण, मैले सबै याद गर्न भ्याइसकेको थिएँ । ठूलो धोद्रो स्वरमा हजुरले गजलको एक शेर भनेपछि वाचनशैली, लेखनशैलीको मिलन जति राम्रो थियो, त्यति नै राम्रो थियो कालो कोटभित्र सेतो टिसर्ट र नीलो जिन्सको मिलन पनि । मतला दोहो¥याउने क्रममा हाम्रै सिटतिर हेर्दै तपाईंले भन्नुभयो—
पर्खिबस तिम्लाई भेट्न
दिन ढलेपछि आउने छु म
साँझपख तिम्रै यादले
मन जलेपछि आउने छु म ।
म झस्केँ । याद गर्नुभयो कि भन्ने सन्त्रासले मैले नियालिरहेको केहीबेरपछि पहिलो–पहिलोपटक स्टेजमा उक्लिएकी म लगलग काँप्न थालेँ । समाइरहेको माइक्रोफोन काँपेको स्पष्ट देखियो । नजिकै आएर भन्नुभएको थियो– डराउनुपर्दैन, सबै तिम्रै साथी हुन् । ममा अलिकति आत्मविश्वास जाग्यो र गजल वाचन गरेँ । धन्न, हात काँपे पनि स्वरचाहिँ काँपेनछ ।
जन्जीरभित्र पनि ऊ
मुस्कुरायो यही सम्झेर
रहरहरु त आजाद छन् ।
मेरो गजलको एक शेर वाचन गर्दै मेरै छेउ हजुर उभिँदा म फेरि लगलग काँपे । आफैँले लेखेको शेर निकै दमदार लाग्यो त्यतिबेला । राम्रो लेख्नुहुँदोरहेछ बैनी ! फेरि सुनाउनुस् न, सुनौँ । हजुरले यति भन्दा म गला रोक्किएर बोल्नै सकिनँ । कहिल्यै कसैका अगाडि उभिएर वाचन गरेको यो पहिलोपटक थियो । एक दिन सुनाउनुपर्छ तपाईंका गजल, म सुन्न आउँछु भन्दै हजुर बाहिरिनुभयो । मलाई सबै साथीहरुले बेस्सरी गाली गरे, किन नबोलेको यत्रो अवसर पाउँदा पनि ! बोल्नुपर्दैन, सुनाउनु पर्दैन ? मौका सधैँसधैँ आउँछ ? म ट्वाल्ल परेर सुनिरहेकी थिएँ । होस्टेल फर्किएपछि श्रीजाले भनी— ‘भाग्यमानी रैछस् स्वस्ती तँ, निश्चल दाइ पनि बोल्न आए । यो कलेजको मोस्ट वान्टेड मान्छे, टपर हुन् टपर ! गीत त्यस्तै राम्रो गाउँछन, स्पोर्ट विकमा उनले भाग नलिएको गेम नै हुँदैन । स्पेसल फुटबलको अति राम्रो खेलाडी, गजल सुनिस् नि आज ? उस्तै राम्रो लेख्ने र गाउने । कार्यक्रम सञ्चालन उनले गरे भने रौनक नै अर्कै हुन्छ । तर, लास्टै घमन्डी छन्, मनमा जे लाग्यो बोलिहाल्ने । अर्कालाई मन परोस् वा नपरोस्, मन दुखोस वा खुशी होस्– वास्तै छैन । जो पायो उसलाई वाल नदिने, मन नपर्ने मान्छेसँग कुरै नगर्ने । मान्छे हेर न, कति ह्यान्सी छन् र कति केटीहरु मरिहत्ते गर्छन्, एकपटक बोल्नकै निम्ति पनि ।
प्रारम्भिक जानकारी यत्ति पाएको हुँ श्रीजाबाट । मन सिमलको भुवाजस्तै भयो, खुशीले राम्रोसँग खाइनँ पनि । आधा रातसम्म सम्झेर खुशी भैरहेँ । नभन्दै एक दिन भेट्न आउनुभयो होस्टेलमा । स्वस्तीको भिजिटर गेटको दिदी कराइन्, को हो ? होस्टेलको बरन्डाबाट चिच्याए निश्चल आकाश । उहाँले भन्दा नभन्दै बुरूक्क उफ्रिएँ म । त्यो भेटमा हजुरले भन्नुभएको थियो– प्लस टु राम्रो गर्नुपर्छ, ब्याचलरलाई सजिलो हुन्छ । म प्लस टु पढ्दा राति २ बजेभन्दाअघि कहिल्यै निदाइनँ । बीई इन्ट्रान्स दिने बेला म लगातार १५ घन्टा एकै ठाउँबाट उठेको छैन । त्यसरी पढेको हुँँ । तिम्रो लेखन राम्रो छ, लेख्दै गर्नू । प्रोग्राम भयो भने सम्झने छु, राम्रोसँग पढ्नू ।
आज गोर्खा एफएममा निश्चल दाइको अन्तरवार्ता छ रे ! नयाँ बाइक लिनुभा’छ रे ! इन्द्रेनी साहित्य समाज (इसास) को अध्यक्ष हुनुभो रे । आक्कलझुक्कल होस्टेलमा कुरा भैरहन्थ्यो– हिजोको गेटअपमा कति राम्रो देखेको, अस्तिको गजल कति मीठो । कहिल्यै साहित्यमा रूचि नहुनेले पनि कुरा गर्थे हजुरको । माहोल त्यस्तै बनाइदिनुभएको हजुरले ।
निकै समयपछि बाटोमा हिँड्दै गर्दा देख्नुभएछ, परैबाट बोलाउनुभयो– स्वस्ती, स्वस्ती भन्दै । म अलमल्ल परेँ, सबै हाँसे । कसले बोलाको श्रीजा ? निश्चल दाइले । अप्ठेरो लागेर आयो, मनमनै रिस उठ्यो । उति परबाट किन बोलाउनु परेको, सबै हाँस्ने गरेर । सोच्दै थिएँ, अगाडि आइसक्नुभएछ । एकछिन बस न स्वस्ती ! म महासंकटमा परेँ । उति परबाट बोलाउँदै आएको आक्रोश ताजै थियो, बस्नै मन थिएन, न बस्दिनँ भन्न नै सकेँ । सबै साथीहरु छोडेर गैदिए, हजुरले त्यति भन्ने बित्तिकै म मजबुरीले बसेँ, बाटोनजिकै दूबो उम्रिएको चौरमा । किन बोलाउनुभएको उति परदेखि ? मन लाग्यो, बोलाएँ ! मन लागेको त गर्ने हो । कुनै दिन ठोक्किँदा पनि नबोल्न सकिन्छ तर अफसोच नमान, म त्यस्तो व्यक्ति हुँँ । सजिलै जवाफ दिनुभयो, म नाजवाफ भएँ र केही बोल्न सकिनँ ।
त्यतिबेला ढुङ्गो टिपेर माटोमा क आकार कोर्दै बस्न थालेँ । हेर स्वस्ती, जिन्दगीमा जसरी हुन्छ खुशी हुने हो । खुसी कसैले ल्याएर दिँदैन तिमीलाई, आफैँभित्र खोज्ने हो । जे गर्दा खुशी लाग्छ, त्यही गर्ने हो । म घर नगएको २ वर्ष भैसक्यो, मन लाग्यो त्यसै गरेँ । खासै सम्पर्क पनि छैन । जुनदिन मन लाग्छ, जान्छु ।
हजुरलाई कसैको माया लाग्दैन हो ? अनि, कसैको डर पनि लाग्दैन हो ?– खुबै डरले सोधेको थिएँ । सबै भेटमा गरेको पहिलो र अन्तिम प्रश्न यही थियो । लाग्छ, खुब माया लाग्छ । आफ्ना रहरहरुको माया लाग्छ, सपनाहरुको माया लाग्छ जसलाई माया र सम्मान गर्ने गर्ने कोही छैन आफूभन्दा अरु । डर पनि लाग्छ, आफ्नै मनसँग । कहिले बहकिन खोज्छ, कहिले चंगा बनेर उड्छ । दुख्ला कि भन्ने डर सधैँ लागिरहन्छ । मनलाई मनकै ठाउँमा राखेर जोगाउन सक्दिनँ कि भन्ने डर लागिरहन्छ । जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो रहर पनि यही मन नदुखाउनु त छ । यही मनसँगै उडिरहनु त छ, खुब मजाले– भन्नुभएको थियो उहाँले । म स्तब्ध बनेँ र फेरि कहिल्यै प्रश्न नसोध्ने प्रण पनि गरेँ, त्यही दिनबाट ।
अस्मीलाई पनि भनिदिएको छु– मलाई फोन गरेन, म्यासेज गरेन, केयर गरेन भन्न पाइनेछैन । उसले हुन्छ भनेकी छे । जिन्दगी आफ्नै पारामा जिउने हो, जसरी सजिलो हुन्छ उसैगरी । भोलि काठमाडौँ प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पुस्तक विमोचन छ रे, निम्तो आएको छ । पर्सि चितवनमा कार्यक्रम छ भने १५ दिनपछि पाल्पामा । अर्को महिना जनकपुर र कोहलपुर पनि पुग्नुछ । यायावरीय जीवन रमाइलो छ । आफूलाई खुशी राख्न सकियो भने जिन्दगी कहिल्यै बोझ लाग्दैन, बुझ्यौ ?
वर्षायाम, पोखराको आकाश ! झर्झर पानी पर्न थाल्यो । दाइ, म जान्छु । बिदा मागेँ र गएँ । बल्ल बिदा पाइस् ? सबैले जिस्काए । के भन्यो, खुब भेट्न आउँछ त तँलाई स्वस्ती ? भएकै केही थिएन, उनीहरुको सोचाइजस्तो ।
त्यो दिन निकै ठूलो पानी प¥यो । सबै आकाशबाट परेको पानी हेरेर टोलाउँदै थिए । अकस्मात् सबै हाँसे । स्वस्ती यहाँ आइज त, ऊ उत्साहित हुँदै मेरो देव्रे हात तान्दै झ्यालनजिकै लगी र भनी— हेर्, तेरो निश्चल आकाश । अचम्म हजुर, त्यति ठूलो पानीमा रूझेर एक्लै बल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, खुब रमाउँदै । कोही
भन्दै थिए, सकिन्छ भने यसरी नै बाँच्नुपर्छ । मन लाएको गर्न पाए र गर्न सके पो त बाँच्नुको मज्जा । साँच्चै स्मार्ट छन्, निश्चल दाइ । छ नि स्मार्ट, साइको छ यो मान्छे, कसैको मतलब छैन– कसैको तर्क थियो ।
जहिल्यै उज्यालो र हँसिलो देखेँ । जतिदिन देखेँ, कहिले छोटो कपाल सफाचट अनुहार त कहिले लामो कपाल लामो दाह्र्री । त्यस्तै रफ गेटअपमा देख्दा झुकिन्थेँ । किन भन्ने प्रश्नको रेडिमेट जवाफ हुन्थ्यो ‘मन लाग्यो गरियो, सुनियो ।’ फुटबल म्याच हजुरको टिमले जित्यो रे, लगत्तै भएको रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा पनि शीर्ष स्थान हासिल गर्नुभयो रे ! मिडियाहरुले राम्रै चर्चा र आलोचना पनि गरे । त्यसै वर्षको अन्यतिर भएको कविता प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभयो रे ! यो पटक पनि उत्तिकै भयो चर्चा र आलोचना । खासै भेट पनि भएन । भेट्न आइराख्ने हजुर एक्कासि हराउनुभयो । सुनियो, पढाइ पनि बिग्रँदै छ रे र कलेज पनि आउनुहुँदैन रे ।
करिब एक वर्षपछि पुनः होस्टेलमै भेट्न आउनुभयो, जसरी पहिलोपटक भेट्न आउनुभएको
थियो । अचम्म पनि त्यतिबेला जत्तिकै लाग्यो । अर्कै लाग्यो, आज देख्दा पनि निकै अर्कै । राम्रोसँग पढ, कतै नलाग, कसैको विश्वास नगर, खुब स्वार्र्थी छन् सबै । तिमी बुझ्दिनौ यहाँ, सबै अर्काको आलोचना गरेर अर्कालाई होच्याएर आफू अग्लो हुन खोज्छ्न । कसैलाई हेक्का पनि छैन, सम्मान गर्दा सम्मानित नै भइन्छ भन्ने । हिँड्न खोज्नेको बाटो रोक्न खोजिन्छ, बोल्नेहरुलाई मूक बनाउन खोजिन्छ । सबै कमजोर छन् र अरुलाई पनि कमजोर नै बनाउन खोज्छन् । मलाई मन परेन स्वस्ती, इसासबाट राजीनाम दिन्छु । आफ्नो पढाइ बिगारेँ, थाहा छैन के हुन्छ ? आफ्ना, आफन्तको पर्वाह गरिनँ, आफ्ना आफ्ना रहेनन् । आफन्तजस्ता रहेनन्, पराई जो आफ्ना लाग्थे पराईकै अनुहार देखाउँदै छन् ! पुरस्कार विवादित भा’छ रे । अस्ति पाएको, जलाइदिन्छु प्रमाणपत्र पनि । अनि, जलाइदिन्छु संग्रह निकाल्ने सपना साँचेर राखेका पान्डुलिपि पनि । केही नभए पनि आत्मसन्तुष्टि त पाउँछु । केही गर्न खोज्नेलाई गर्न दिइन्न, सबलाई निदाउने बानी परेको छ ।
इसासको अध्यक्ष भएपछि यतैको दौडधूपले अस्मीलाई समय दिन सकिनँ । सधैँ गुनासो गरिरहन्थी, मेरो लागि मात्र समय हुन्न है भन्दै । त्यतिबेला सानो लाग्यो, यी कुरा । आज ऊ पनि आफ्नी रहिनँ, दुख्ख लाग्छ । आँखा रसिला पार्दै भन्नुभयो– नाम निकाल्नुपर्छ, राम्रोसँग पढ जिन्दगी बन्नेछ । ट्रयाक छोडेपछि ट्रयाकमा आउन गाह्रो छ । लेख तर सपना नसँगाल । आशा नराख, यही नै अन्तिम भेट थियो ।
लामो भयो भेटाइ त्यसदिनको । सबैले यसरी जिस्काए कि जवाफ दिने ठाउँ नै पाइनँ मैले । कलेजमा हल्ला चल्यो, निश्चल आकाश सधैँ स्वस्तीलाई भेट्न जान्छ रे । त्यसदिनपछि मैले कलेजमा कहिल्यै देखिनँ र कसैलाई सोध्ने आँट पनि आएन । जिस्काउँछन् भन्ने डरले कहिलेकाहीँ मलाई नै सोध्थे— स्वस्ती, कहाँ जानुभएको निस्चल ? ‘बाबरी’ पत्रिकामा हजुरका लेख आउन छोडे, हेरिराख्थेँ । मिडियाहरुबाट पनि यसरी गायब हुनुभो, लाग्यो दुनियाँले
बिस्र्यो । निश्चल आकाशलाई मात्र म सम्झँदै छु, मोबाइल नम्बर पनि सम्पर्क हुन सकेन भन्न थाल्यो ।
सम्झेको दिन कुन्नि के आशा ब्युँझन्थ्यो, पुरानो नम्बर डायल गर्थें, फेसबुकमा सर्च गर्थेंं तर कहिल्यै भेट्टाउँदैन थेँ । त्यहीक्रममा हो, अस्ति पनि सर्च गरेको हजुर भेटिनुभो । दारी, जुँगा र कपाल काटिएको हो कि होइनजस्तो लाग्यो । निश्चल आकाश त निश्चल खनाल बनेको रहेछ । फोटोमा क्लिक गरेर पुराना फोटाहरु हेर्दै गएँ । मैले देखेको अनुहारको प्रतिबिम्ब पनि थियो । कभर फोटोमा सानी फुच्ची र अस्मीजस्तै लाग्ने अनुहार थियो हजुरसँगै । फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरेको नोटिफिकेसन आउनेबित्तिकै यत्ति लेखेर सेन्ड गरेँ— कहाँ हराउनुभयो, लेख्न किन छाड्नुभयो ?
त्यसदिन बेलुकी निकै रक्सी पिएँ एक्लै । गजल, कविता सुन्ने र सुनाउने अनि किताब निकाल्न उक्साउनेको जमघट थिएन, न पिउन उक्साउनेको नै । लर्खराउँदै कोठामा पुगेँ र किताब निकाल्न तयार पारेको पाण्डुलिपि च्यातेँ । प्रत्येक एफएम रेडियोबाट बज्न थाले, पत्रिकाहरुमा टीकाटिप्पणी आउन थाले, कविता प्रतियोगिताको पुरस्कार निश्चल आकाशले पाएको कविताले होइन भन्नेसम्म सुनियो । आयोजक संस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । ठूलो धोका दिएझैँ लाग्यो लेखेर । अब स्पष्टीकरण दिनु थिएन । कला मोहले ममा जन्माएको पागलपनको हिसाब गर्नु थिएन, पाउनु र गुमाउनुको । चुरोट सल्काउँदै सोचेँ, इसासबाट राजीनामा दिन्छु । म जहाँ रहेर पनि गर्न सक्छु, शब्दहरुलाई र अक्षरहरुलाई प्रेम । बाबरीमा स्तम्भ पनि लेखिनँ, विवाद पनि बन्धन नै थियो मेरा लागि । कतै नअल्झेर पुग्नु थियो, शब्दहरुलाई बोकेर शब्द–शिखर ।
फुटबल म्याच जितेको दिनदेखि नै सुनकोसी क्लबले आफ्नो टिममा बसिदिन लालच र धम्की दिन थालेको थियो । थाहा पायौ होला, आधुनिक गीतको शब्द सुबोध कर्माचार्य दाइको गीतसँग मिल्यो रे । प्रथम घोषणा गरेपछि मात्र उहाँले विरोध जनाउनुभयो । उसो त, सुबोध दाइसँग संगीत सिक्न जाँदादेखि नै राम्रो थिएन मेरो । तर, म सिक्दै गरेको मान्छे र उहाँ दुनियाँले सम्मान गरेको मान्छे, अझ परेली साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष । उहाँका विरूद्ध बोल्ने आँट न म गर्न सक्थेँ, न कोही अरु । भोलिपल्ट परेली साहित्य प्रतिष्ठानले गीत पुरस्कृत भएकोमा खेद प्रकट गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । सबै साहित्यिक संस्थाहरु त्यसैको पछि लागे, मन मर्दै गयो ।
इसासबाट राजीनाम दिएँ, खुसी नै भएँ त्यसरात पनि । मोबाइल अफ गरेँ, सिम भाँचेर फालिदिएँ । फेसबुकलाई निष्क्रिय बनाएपछि मुक्त भइयो, स्वतन्त्र भइयो भन्ने लाग्यो । खुशी हुँदै निदाएँ, चाहेको स्वतन्त्रता यही हो भन्ने लाग्यो । तर, भोलिपल्टबाट केही थिएन आफूसँग । केही छुटेका थिए, केही आफैँले छोडेर आएको थिएँ– स्वतन्त्र हुने, खुसी हुने बहानामा । बाबरीका लागि स्तम्भ लेख्नुपर्ने मजबुरी थिएन । इसासको प्रोग्रामका निम्ति हतार थिएन, ‘नजर’ प्रकाशनका लागि प्रेस धाइरहनु पर्ने थिएन । भूमिका र सुझावका निम्ति भेटघाटको जरूरी थिएन । साँझ चियापसल वा भट्टीपसलमा हुने भेटघाट र सुनाइरहने कविता, गजल, गीत केही थिएन अब । त्यसै–त्यसै अत्यास लागेर आयो ।
एक दिन पनि खुशी हुन सकिनँ म । आफूले चाहेको स्वतन्त्र जिन्दगीमा अत्यासिलो सुनसानभन्दा केही थिएन । एकान्तप्रेमी भएकाले रूममा आउने–जाने पनि कोही थिएनन् । पटक्कै खुशी भएन मन । आफ्नै चाहना पनि कति झूट रहेछ, थाहा पाएँ त्यही क्षण । यायावरले बिगारेको पढाइ याद आयो, कोल्टे फेर्दै सम्झेँ । कसैको मतलब लाग्दैन है बाबु, तलाईं ? आमाले दुःखी हुँदै भनेको सम्झेँ । इसासमा लागेर दिनरात नभनी गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु र परिचित बनेको इन्द्रेनी साहित्य समाजको अनुहार अनि यादमा आई अस्मी वर्र्षिदनपछि । लेख्न नभुल्नुहोला मलाई, भुले पनि म खुशी नै हुनेछु– अन्तिम भेटको अन्तिम क्षणमा आँखा टिलपिल पार्दैभन्दा पनि म मन नदुखाई फर्केको क्षण । सोच्दासोच्दै निदाएछु । बिहानै उठेर घरमा फोन गरेँ । के भो निश्चल, एकाबिहानै फोन गरिस् । सन्चो भएन कि के भो ? आमा आत्तिनुभो मात्र, घरमा फोन गर्दा पनि अचम्म मान्ने आत्तिने भैसकेछन्, दुःख लाग्यो । दिनभरि फोन आइरहे घरपरिवारबाट– बिहानै आमालाई फोन गरिस् रे, के भो भन्दै । टाढा भएछुझैँ लाग्यो, आमाबाट पनि ।
भोलिपल्ट घर पुगेँ । निकै बेग्लै लाग्यो ३ वर्षपछिको आफ्नै घर र आफ्नै मान्छे । बाबाले छरिराख्ने सपनाको बिस्कुन थिएन, जुन बोझ लाग्थ्यो । आमाले सुनाइराख्ने गुनासा थिएनन् । थिएनन् अस्मीका गुनासा पनि, जुन बन्धन लाग्थ्यो । मान्छे बन्न प्रेरित गर्ने आफन्तका सुझाव पनि थिएनन् । लाग्थ्यो, सबै मेरो उपस्थितिमा नै सन्तुष्ट छन् । कोही आफ्ना लागेनन् । आफ्नो बनाउने बाबाको सपना रहेछ, आमाको गुनासो रहेछ । जसलाई बोझ सम्झेथेँ, बन्धन सम्झेथेँ, बेलुकी कोल्टे फेर्दै सोचेँ– नमीठो लाग्यो ।
सधैँ भताभुङ्ग भएको आरोप खेपिरहने मेरो कोठा चिटिक्क थियो । टेबलभरि किताब मिलाएर राखिएका थिए । अलि पुरानो हुनासाथै आगो सल्काउन प्रयोग हुन्थे । कुनै भकारीको तल पुग्थे त केही प्वाल परेको बोराको तल । म मन अमिलो बनाउँदै निकै रून्थेँ र पनि यो क्रम कहिल्यै रोक्न सकेको थिएन मेरा आँसुले । आज निकै पुराना आधा च्यातिएका किताबहरु पनि निकै जतनले टेबलमाथि सजिएका रहेछन् । पुरानो टर्च जो मेरो सिरानीमै रहन्थ्यो र म आधा रातमा ब्युँझेर यसैको सहायताले लेखिरहन्थेँ, जुन फुटेको थियो बाबाको निद्रा बिथोलेको आरोपमा । ३ दिनसम्म कसैसँग बोल्न सकेको थिइनँ यसको वियोगमा । यत्तिकै पोखरा हिँडेको थिएँ । अहिले त्यो बनाएर टेबलमाथि रखिएको रहेछ, नजर पुग्नासाथ टपक्क टिपेँ । सँगै रहेको पेन पनि गुडगुडिएर झर्न लाग्यो, त्यसलाई हातले समाएँ । एकाएक खुशीको बाढी नै आयो । त्यही पेन थियो, जसले अस्मी र मलाई कयौँपटक टाढा र नजिक बनाएको थियो । जब यो पेन लिएर देव्रेपट्टि झ्यालबाट बाहिर हेर्थें, मन अर्कै हुन्थ्यो र खर्खर लेख्न सक्थेँ । निकै राम्रा बन्थे त्यो पेनले लेखेका सिर्जनाहरु र सफल हुन्थेँ । परीक्षाको बेलामा मात्र निकाल्थी, उसको परीक्षा राम्रो हुन्छ रे त्यो पेनले लेख्दा भनेर । उसको यस्तो विश्वास थियो । कलेज पढ्दासम्म उसको त्यो विश्वासले काम गरिरह्यो । राम्रो लेखक बन्ने मोहले छोप्दा कतिपटक चोरेर पनि चोर्नै नसकेर फिर्ता गरेको छु र झगडाको कारण बनेको छ्र ।
पेन टिपेर टेबलमा रहेको डायरी पल्टाएँ, पहिलो पेजमा नै अस्मीका अक्षरहरु रहेछन्— ‘तिमीबिना बाँकी जिन्दगी र पेनबिनाको बाँकी परीक्षा हेरौँ । घर फर्कियौँ भने पछाडिको झ्याल र यो पेन तिम्रो हुनेछ र विश्वाश छ, यसले तिमीलाई अझै राम्रो लेख्न सक्ने बनाउने छ’— लेख्ने रहर यत्तिकै म¥यो ।
निमेष खनाल नयाँ फेसबुक आइडी बनाएँ र एड गरेँ अस्मीलाई । फोन गरेँ, ऊ निकै बेर रोई । फेरि सम्झायौ है भन्दै ऊ रोइरही, आफ्ना कहिल्यै पराई हुन्ननझैँ लाग्यो । तर, निश्चल आकाश भुल्ने बहानामा अमेरिका पुगेकी अस्मी फर्किन मानिन ।
कलेज जान छोडेको नै छ महिना हुन लाइसकेछ । पोखरासँग नै मन मर्न लाग्यो, धरान ट्रान्सफर गरेर बाँकी कोर्स पूरा गरेँ । घरका मान्छेहरु सबै हारिसकेका थिए मेरो रहरसँग । तर, त्यो समय म आफैँ हारिसकेको थिएँ आफ्नै रहरसँग ।
खुब चर्चित भयो रे गीत, इसासले म्युजिक भिडियो बनायो रे, युट्युबमा खुब हेरियो रे । पोखरेली साहित्यिक संस्थाले गीतको पक्षमा र विवादित कविताको पक्षमा बोलिदिए रे । पछि सुनेको थिएँ अमेरिका आइसकेपछि, खासै वास्ता लागेन । १० वर्षपछि नेपाल फर्किएको म, पोखराको माइक्रो चढ्नेबित्तिकै आफ्नै गीत बज्यो । जुन गीतले शीर्ष स्थान हासिल गरेको थियो । बसमा रहेका केही बुद्धिजीवीहरुले आफ्नै प्रकारले विश्लेषण गरे गीतको र हराएको निश्चल आकाशको । सम्झिने, माया गर्ने अझै रहेछन्झैँ लाग्यो । निमेष खनाल परिवर्तन गरेर निश्चल खनाल बनाएँ । नलेखी बस्न त सक्दिनँ, पहिलेझैँ सक्रिय पनि छैन । कुनै दिनलाई प्रिय बनाइयो, प्रिय बनियो । ती रहरहरु, खुसीहरु त्यति नै बेलाका लागि सुहाउँदा रहेछन् । सम्भव हुँदा रहेछन्, जहाँ पुगे पनि आफ्नो जिन्दगी बोकेरै हिंँड्नुपर्दाे रहेछ । जिन्दगी बिसाएर हिँड्ने प्रयास गरेका दिनहरु यादमा आउँछन् । जिन्दगी यसरी नै चल्दैछ । रिप्लाइ पनि आएको रहेछ ।
सुनाउनु पर्ने छ, बुझाउनु पर्ने छ, बाधा–अड्चन मीठो सिर्जना बन्नेछ, कवि हजुरको भोगाइ । अक्षरहरुको शक्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । लेख्न नछाड्नुहोला । टाइप गरेँ र रिप्लाइमा क्लिक गरेँ ।